Inqaku leMoto le-Apple elibalulekileyo lokuseta ukongeza inkxaso ye-U1 Ultra Wideband kulo nyaka Ndisuka mac
Inqaku leMoto eliphambili le-Apple licwangciselwe ukongeza inkxaso ye-U1 ye-Wideband kulo nyaka
Kunyaka ophelileyo iWWDC, iApple yazisa inqaku elitsha lemoto. Inqaku livumela abaqhubi ukuba bathathe indawo yezitshixo zemoto zabo ngezixhobo ezithile zeApple ezinje ngeApple Watch okanye i-iPhone. Uhlaziyo kwinkcazo yedijithali yokukhutshwa kweenkcukacha ezizayo kamva kulo nyaka ziya kongeza Inkxaso yoqhagamshelo lwe-Ultra Wideband. Kwakhona kwiBluetooth Energy Energy.
Uhlaziyo olutsha belukhona kwaziswa yi-Automobile Connectivity Consortium, apho ilungu le-Apple lilungu. Ukucaciswa kweDijithali engu-3.0 iya kubakho kwi-Apple nakwamanye amalungu e-Consortium phakathi kulo nyaka. Kwi-Apple, oku kuthetha ukuba iya kuba nakho ukuhlaziya umsebenzi ophambili wemoto ngenkxaso ye-Ultra Wideband U1 chip. Unxibelelwano lweMoto Consortium ithi oku kuyakuvumela izixhobo ukuba zenze imilinganiselo yomgama "ekhuselekileyo nechanekileyo" ukuvula imoto yomsebenzisi.
Ukukhutshwa kwesitshixo kwidijithali i-3.0 idilesi kwezokhuseleko kunye nokusebenziseka ngokungqinisisa isitshixo sedijithali phakathi kwesithuthi kunye neselfowuni ngeBluetooth Energy. Emva koko misela iseshoni ekhuselekileyo yokuhamba kunye ne-UWB, evumela isithuthi ukuba sithathe imilinganiselo yomgama ikhuselekile kwaye ichanekile ukukhangela isixhobo esiphathwayo.
Izixhobo eziphathwayo zenza kunye nokugcina amaqhosha edijithali kwizinto ezikhuselekileyo ezibonelela ngenqanaba eliphezulu lokhuseleko ngokuchasene nezixhobo zekhompyuter okanye uhlaselo olusekwe kwisoftware. Utshintshiselwano lwe-UWB lukwavelisa iiparameter ze-cryptographic. Oku kuqinisekisa ukhuseleko oluphezulu ekufumaneni isixhobo kwisithuthi kwaye, ke, gunyazisa umsebenzisi ukuba afikelele kwaye aqhube isithuthi.
I-Consortium yoQhagamshelo lwezeMoto ikwaphawula ukuba le 'nkcazo intsha iya kuvumela abathengi ukuba basebenzise eyabo isixhobo sefowuni njengeqhosha ledijithali elingenazandla«. I-BMW ngaphambili ibibhengeze izicwangciso zokudibanisa inkxaso ye-Ultra Wideband kwiqonga layo laseYurophu kamva kulo nyaka.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Inqaku leMoto eliphambili le-Apple licwangciselwe ukongeza inkxaso ye-U1 ye-Wideband kulo nyaka
Amaxabiso kunye neempawu zenkqubo entsha ye-iPad